लकडाउनभर लुमेकमा चार सय अठार बिरामीको उपचार - Boli Dainik
पाल्पा । लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास पाल्पाले लकडाउनको अवधिमा ४ सय १८ जनाको आकस्मिक बिरामीको स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार गरेको छ ।
सरकारले चैत्र ११ देखि लकडाउन घोषणा गरेपछि अस्पतालले बिरामी फर्काए र बिरामी जाँच गरेनन् भन्ने हल्लाको बीचमा अस्पतालका निर्देशक डा. राजु शाक्यले १४ दिनको अवधिमा आकस्मिक सेवा इमरजेन्सीमा ४ सय १८ जनाको स्वास्थ्य जाँच र उपचार गरिएको बताउनुभयो । लुम्बिनी मेडिकल कलेजले यो अवधिमा १ सय ५० जना बिरामी भर्ना गरी उपचार गरेको, ज्वरो मापन केन्द्रमा २० जनालाई ज्वरो परीक्षण भएको जनाएको छ ।
अस्पताल निर्देशक शाक्यले कोरोना संक्रमणको शंकामा ३ जनाको स्वाव परीक्षण गरिएकोमा तीनै जनाको नेगेटिभ आएको जानकारी दिनुभयो । अस्पतालले ज्वरो मापन केन्द्रमा बिरामीसँगै गएका व्यक्तिलाई पनि बोलाएर ज्वरो मापन गरिरहेको छ । अस्पतालले बनाएको मेडिकल कार्यदलका संयोजक प्राध्यापक डा. राजकुमार क्षेत्रीले कोरोना भाइरसको रोकथाम भनेकै एकान्तमा बस्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र बाहिरी व्यक्तिसँग सम्पर्कमा नरहने नै हो भन्नुभयो ।
कोरोना संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेपछि लुम्बिनी मेडिकल कलेजले २८ वटा आइसोलेसन बेड तयार गरी राखिएको अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो । अस्पतालका आइसोलेसन बेडमा भेन्टिलेटरसहितको वेडको व्यवस्था हुने उहाँको भनाई छ । अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो ‘प्रारम्भिक दिनमा केही दोधारपन भयो । अहिले मुटु र छाती खुला गरेर कोरोनाको बिरामी उपचार गर्न अस्पताल तयार रहेको छ । डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीमो मनोबल उठाउन म आफै अस्पतालमा सँगै बसेको छु ।
लुम्बिनी मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य विमा गरेका बिरामीको फलोअप उपचार पनि गर्न थालेको छ ।